Amandla avuselelekayo enza i-17,3% yokusetshenziswa kwamandla kokugcina | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Ngokwedatha evalwe ngo-2016 evela kwi-Institute of Economic Studies (IEE), i- amandla avuselelekayo ungeze i- 17,3% i-del ukusetshenziswa kokugcina okuphelele yamandla eSpain.
Izivumelwano zaseParis zokuvuselelwa zikhombisa ukuthi i-EU iyonke kufanele ifinyelele isilinganiso seminikelo engama-2020% kusuka emithonjeni evuselelekayo kuya ekusetshenzisweni kokugcina kwamandla ngo-20.
1 Umehluko phakathi kwamazwe
1.1 Amazwe angaphansi kwesilinganiso
2 Amandla avuselelekayo eSpain nekusasa lawo
3 Imiphakathi ezimele
3.2 UCastile noLeon
3.5 Iziqhingi zaseCanary
Umehluko phakathi kwamazwe
Njengamanje, iSweden ingumholi kude, ifinyelela kuma-53,8%. Ngakolunye uhlangothi, iFinland ifinyelele kuma-38,7% kwathi eLatvia yathola u-37,2%, kuyilapho i-Austria ibhalise ngo-33,5% kanti kunjalo eduze kakhulu nomgomo wakho ngo-2020, kanti iDenmark isivele isidlulile, ngo-32,2%.
Amanye amazwe anjengeLatvia, iPortugal neCroatia abalwa phezulu ngaphezulu I-28% neLithuania neRomania cishe zingama-25%. Endabeni yeSlovenia ifinyelela kuma-21,3% kuthi iBulgaria ibe ngu-18,8%, kuyilapho i-Italy ibhalise u-17,4%. Mayelana neSpain, idlulele ngaphezu kwephuzu elilodwa futhi yeqa isilinganiso se-European Union, yafinyelela ku-17,3% ekupheleni kuka-2016.
Amazwe angaphansi kwesilinganiso
Ngeshwa iFrance isivele ingaphansi kwe- isilinganiso nge-16%, njengoba kwenzeka eGrisi, eCzech Republic naseJalimane, ngamanani acishe abe yi-15%. Amazwe angaphansi kwe-EU yiMalta, iNetherlands neLuxembourg, aphakathi kuka-6% no-5,4%, ngokulandelana.
Amandla avuselelekayo eSpain nekusasa lawo
Ngemuva kweminyaka embalwa emibi ngenxa yemithetho yezimemezelo zeQembu Elidumile, Imiphakathi Ezizimele iyabheja futhi ngentuthuko entsha evuselelekayo. Kuphela indalini ebanjwe ngo-2016 nango-2017 inika ithuba lokufaka amamegawathi ayisishiyagalombili namakhulu ayisikhombisa amandla amasha
Lezi zakhiwo ezintsha zizoba nazo izimali ngaphezulu kwama-euro ayizigidi ezingama-8250, ngaphezu kokukhiqiza imisebenzi engama-90.000 ngesikhathi sesigaba sokufakwa.
Kodwa-ke, intuthuko evuselelekayo iba kakhulu okungalingani kuzimele ezahlukahlukene, njengoba kuqinisekiswe yi-Study of the Macroeconomic Impact of Renewable Energy in Spain eshicilelwe yi-Association of Renewable Energy Companies (APPA). Ngakho-ke, uCastilla y León uhola intshisekelo 'yamandla ahlanzekile' ngamamegawathi angama-6.474 XNUMX afakiwe, iningi ngokusebenzisa umoya. Zilandelwa yi-Andalusia, Castilla-La Mancha neGalicia. Ngokuphambene nalokho, iziqhingi zaseBalearic, iCantabria neMadrid zingaphansi kwalolu hlu.
Kufakiwe Power of renewable technologies 2016 (MW)
Fuente: Inhlangano Yezinkampani Zamandla Avuselelekayo
Ngokulandelayo sizobona izindaba eziningana eziqinisekisa ukubheja kokuvuselelwa kwemiphakathi ezimele.
UHulumeni wase-Aragon ulinganisele utshalomali ku- Amaphrojekthi omoya angama-48, isamba semali engu-1.667,90 MW, kanye izitshalo eziyishumi nambili ze-photovoltaic solar, etholakala komasipala base-Escatrón naseChiprana ngamandla we-549,02 MWp.
Lo mfutho waqala cishe unyaka owedlule lapho kuvunywa imibandela emisha yokunikeza lesi simemezelo kutshalomali kumandla avuselelekayo.
Lokhu Ukuzimela kuxhasa ukwenziwa ngcono kwamandla ngama-euro ayizigidi eziningana. Ibhodi lihlose ukufaka isandla ekuguqulweni okuya emnothweni wekhabhoni ephansi kuyo yonke imikhakha yokukhiqiza neyenhlalo, ngaphakathi kohlaka Isu Ukusebenza kahle kwamandla 2016-2020, obekungaphansi kokubamba iqhaza kwezakhamizi kuHulumeni Ovulekile.
Ngokusho kukaHulumeni waseCastilian-Leonese, ngiyabonga lezi zimali zingakhokhela ukuthuthuka ezikhungweni okushisayo nokukhanya (inqobo nje uma ukonga amandla okungenani okungama-20% kufakazelwe), njengokungenelela kumakheshi noma ama-escalator, lapho ukuncipha kokusetshenziswa kwamandla okungenani kungama-30%.
EGalicia kunombuso wemvula ophakeme futhi, ngakho-ke, amandla elanga awasebenzi kahle, wethule isu lokuthuthukisa amandla e-biomass. Umphumela webhalansi ukuthi Ekupheleni konyaka we-2017, ukufakwa kwama-boilers we-biomass angaphezu kwama-4.000 emakhaya kuzabe sekusekelwe.
Ngomugqa wesabelomali zama-euro ayizigidi ezingama-3,3, iXunta de Galicia ifuna ukugqugquzela ukufakwa kwama-biomass boilers ukukhuthaza ukukhiqizwa kwamandla avuselelekayo nokunciphisa ukukhishwa kwamagesi abamba ukushisa okushisa okweqile ezindaweni ezingaphezu kuka-200 zomphakathi, izinhlangano ezingenzi nzuzo nezinkampani zaseGalician.
Iziqhingi zaseBalearic zandisa inzalo emandleni avuselelekayo. I-General Directorate of Energy and Climate Change icubungula amaphrojekthi ayisikhombisa we amapaki we-photovoltaicLokhu kuzosho ukwanda ngama-25% kwamandla avuselelekayo afakwe kulezi ziqhingi njengamanje. Lawa ngamaphrojekthi amancane, abalelwa ngaphezulu nje kwama-20 MW.
Kungabonakala ukuthi amaphrojekthi amasha awamele inani eliphezulu kakhulu lamandla amasha, umqondisi jikelele we-Energy and Climate Camabio, uJoan Groizard, ulithokozile iqhaza labo. Ngeshwa, okwamanje eziQhingini zaseBalearic kunamamegawathi angama-79 kuphela wamandla avuselelekayo afakiwe.
Ngenxa yeCanary Islands Development Fund, i-FDCAN, ngaphezu kwe- Imiklamo engama-90 yokwenza ngcono ukuphathwa kwamandla owethulwe ngomasipala namanyuvesi nemikhandlu, bazothola uxhaso lwama-euro ayizigidi ezingama-228.
UHulumeni weziQhingi zaseCanary ubikile ukuthi lawa maphrojekthi uhlose ukwandisa ukusetshenziswa kwamandla avuselelekayo, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla nokuthuthukisa ukuhamba okuzinzile, ukuze kusetshenziswe imodeli yamandla efaneleke kakhulu eCanary Islands.
UMnu Fernando Clavijo, umongameli wamanje we-Canary Islands, esitatimendeni uthe endaweni efana neCanary Islands Kubalulekile ukuthuthukisa amaphrojekthi avumela ukukhuthaza ukonga amandla nokusebenza kahle, ukunciphisa izindleko nokuqhubekela phambili ekwakheni imodeli eqhubekayo futhi enokuncintisana.
UClavijo ubheka ukuthi iCanary Islands inezimo zemvelo eziphelele, ezivumela ukukhuthaza i- ukuthuthukiswa kokuvuselelwa kabusha, hhayi nje kuphela ukuqhubekela phambili ekushintsheni kwemodeli yamandla, kepha futhi njengomsebenzi wokwehlukanisa umnotho weziqhingi, ngaleyo ndlela kwandise iGDP yazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amandla avuselelekayo enza i-17,3% yokusetshenziswa kwamandla kokugcina
UFrancisco Ruben Torres kusho
I-athikili enhle, ngiyabonga kakhulu.
Phendula uFrancisco Rubén Torres